The Internet Inozivikanwa saiti yevanhu yaive nenhamba dzinoyemurika uye runyorwa runotonyanya kushamisa rwevashambadziri. Ivo vaizviti vanopfuura makumi mashanu evaverengi vezuva nezuva pakati pezvinhu zvavo zvese zvekugovera Ndo vateereri vakanaka kusvika! Uye vateereri vaive shangu-mukati yechigadzirwa changu. Izvo zvaive zvese ipapo: eyeballs uye yakanangwa vateereri. Kana kuti?
Mazhinji acho haanyatsoshanda nevatengi (kunze kweavo vanoda kuhaya mumwe munhu Internet inozivikanwa uye hauna tarisiro yemhedzisiro). Vazhinji vavo vari mubishi kuyedza kuchengetedza chitarisiko chekuti ivo vanoteverwa zvakanyanya uye vakangwara kupfuura isu tese. Mazhinji acho anokurumidza, akangwara, nenjere, uye masters ezviri pachena. Vazhinji vavo vane mabhuku emabhuku. Vamwe vavo vakabatikana vachiwedzeredza nhamba kuti varambe vachioneka.
Ndosaka ndichifarira kwazvo iyi blog uye mabloggi ari mubhodhi (nezvakawanda zviri kuuya). Isu tese tiri vashambadzi vanoshanda zuva rega rega kusimudzira kubudirira kwevatengi vedu. Iyo blog ishungu yedu, kwete purofiti yedu. Pamwe rimwe zuva tichazobuda tobva tave Internet Inozivikanwa. Kana ari ini, ita chokwadi chekunyora nezvangu uye undibate ndizvidavirire, zvakadaro!